Yuunvarsiitii Ambootti, Wiirtuun Aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadihin ebbifame – Fana Broadcasting Corporate
Yuunvarsiitii Ambootti, Wiirtuun Aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadihin ebbifame
Finfinnee, Onkololeessa 10, 2012 (FBC) – Yuunvarsiitii Ambootti Wiirtuun Qorannoo fi Qo’annoo Aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadihin Qawweessaa ebbifame.
Ministir deettaan Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo Dooktar Saamu’eel Kiflee fi preezdaantiin Yuunvarsiitii Amboo Dooktar Taaddasaa Qana’aan wiirticha ifatti ebbisanii tajaajilaaf banaa ta’eera.
Yuunvarsiitichi waltajjii qorannoo fi qo’annaa hojiilee Looreet Tsaggaayee Gabramadihin Qawweessaarratti xiyyeeffatan gaggeessera.
Wiirtichi bara 2011 kan hundaa’e yammuu ta’u, aadaa saboota, sablammootaa fi ummattoota Ityoophiyaarratti qorannoo gaggeessuun beekumsichi akka babal’atu ni hojjeta.
Hundaa’uun wiirtichaa hayyoota jajjaboo akka Looreet Tsaggaayee Gabramadihin yookin Roobaa Qawweessaa fakkaatan hedduu horachuuf kan kaayyeffate ta’uu preezdaantiin Yuunvarsiitii Amboo Dooktar Taaddasaa Qana’aa himaniiru.
Looreet Tsaggaayeen bara 1928 godina Shawaa Lixaa naannoo magaalaa Amboo cinaatti iddoo Goromtii jedhamutti dhalatee guddate.
Barreeffama ogbarruutif jaalala qabaachuu kan agarsiise mana barnootaa sadarkaa 1ffaatti ture.
Amma du’aan boqatu bara 1998tti; hojiilee maqaasaa awwaalaa olitti dhoofsisan hedduu fi jajjaboo gumaachera.
Ogbarruu Ityoophiyaa keessatti kabajaa Looreetummaa isa gonfachiise; hayyuu argachuu danda’edha.
Looreet Tsaggaayee Gabramadihin walaloo, tiyaatira, taphoota gaggabaaboo fi dhedheeraa, diraamaa fi daayreektarummaan hiriyaa hin qabu ture.
Hojiilee maqaa ofii ittiin dhoofsiserra darbee, biyyi isaatuu isaan akka beekamtu hayyuu qoodasaa gumaachuu danda’edha.
Looreet Tsaggaayee waa’ee ateetee, sirna Gadaa, qaroomina ilmaan Kuush, galma Abbaa Gadaa, Awash, Markaatoo, Tewodroos IIffaa, Abuna Pheexroos, Odaa, hojiilee Sheekispiir(Haamleetii fi Oteelloo), hojiilee jireenya ilma namaa, jibba, jaalala, gadda, gammachuu, biyya, badhaadhina, dhaba, waan hundarratti mataduree hundaan barreessee gumaachera.
Looreet Tsaggaayen walaloowwan isaa afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziin barreessee maxxansiisera; waltajjiirra baasee daawwataafis dhiyeessera.
Hojiilee aartii isaa keessatti aadaa, duudhaa fi sirna Gadaa Oromootif iddoo laatera.
Wiirtuun qorannaa Yuunvarsiitii Amboo keessatti hundaa’aa jirus hojii Looreet Tsaggaayee Gabramadihin irratti xinxala gaggeessuu fi hayyoota akka isaa hedduu horachuu dandeessisa jedhaniiru preezdaantichi.
Maqaan Maartii Luuter Kiing daandiirra akka ka’u godhame
Ibsa haala yeroo irratti Mootummaan Naannoo Oromiyaa kenne
Iiraan gaazii hin calalaamne barmeela biiliyoona 53 argachuu…
Walitti bu’iinsa Yuunvarsiitii Waldiyaatti ummameen…
Mariin Haala walitti bu’iinsa hiikuun danda’amu irratti…